West Coast of Ireland, dia fitsangatsanganana ilaina (I) | Vaovao momba ny dia
Enric Gili | | Dublin, General, Irlandy, Tsangatsangana
Androany aho hanazava ny tapany voalohany amin'ny zotram-piaramanidina nitondra ny morontsiraka andrefan'i Irlandy aho, ny morontsiraka Atlantika. Faritra ahitana sary miavaka tsy mampino. Heveriko fa tena Irlandy.
Amin'ny fitetezam-paritany 6 andro, 5 amin'izy ireo amin'ny lafiny Atlantika an'ny firenena ary iray andro ao amin'ny renivohitra Irlandy (izay efa notsidihiko teo aloha). Ny toerana niandohako isaky ny fitsangatsanganana dia ny Galway City, any andrefana indrindra.
Ny morontsiraka Atlantika ao amin'ny firenena dia manana ahitra maitso maitso tanteraka noho ny toetrandro, ny orana ary ny rivotra azo antoka mandritra ny taona.
Galway dia iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra any Irlandy, na dia 75000 aza ny mponina ao aminy. Tanàna oniversite izy io, misy hetsika ara-kolontsaina marobe, ary adiny 2 amin'ny fiara avy any Dublin.
Ny firenena Anglo-Saxon dia manolotra izay ilainao rehetra ho an'ireo tia natiora, filaminana, fomban-drazana ary fomba amam-panao nentim-paharazana.
1 Ahoana ny fomba hahatongavana any Galway ary inona no hatao?
2 Andro 1: Cliff of Moher, Irakiana tsy maintsy ananana
Ahoana ny fomba hahatongavana any Galway ary inona no hatao?
ankehitriny tsy misy sidina mivantana mampifandray tanàna Espaniola miaraka amin'i Galway. Ny akaiky indrindra dia manidina any Dublin na Cork ary avy eo mifindra any Galway.
Mino aho fa i Galway no safidy tsara indrindra amin'ny toby ifotony hahafahana manao ireo lalana sy fitsangatsanganana samihafa any amin'ilay faritra. Raha te hampifantoka ny dianao any avaratra ianao ary hampiditra an'i Irlandy Avaratra, Westport (tokotokony ho 100Km avaratry Galway) dia tanàna iray lehibe sy tsara tarehy azo heverina ho ivon-toerana sy hanombohana ny dia.
Manoro hevitra anao aho manidina any Dublin ary manofa fiara mivantana eo amin'ny seranam-piaramanidina. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mitsidika ny renivohitra Irlandy sy ny lapa ao afovoan'i Irlandy.
Ny elanelam-potoana elanelana misy eo amin'ireo mponina roa dia 200Km eo ho eo, adiny roa sy sasany eo ho eo amin'ny fiara, ny ankamaroany dia amin'ny lalambe. Avy any Cork dia mitovy ny halavirana fa ny arabe dia lalana, noho izany dia tsy maintsy manana ora 3 mihoatra isika hanatratra ny toerana hiaingantsika.
Ny làlambe sy ny arabe ao amin'ny firenena dia tena tsara amin'ny ankapobeny ary ankoatra an'i Dublin dia tsy dia be ny fifamoivoizana. Ataovy ao an-tsaina fa mitondra fiara amin'ny ankavia ianao!
I Galway dia tanàna salantsalany ary azo tsidihina an-tongotra mora foana.
El Tena tsara tarehy ny foibe manan-tantara ary manasongadina ny arabe malalaky ny mpandeha an-tongotra sy ny trano fisotroana Irlandey tena izy. Toerana tsara izy io raha manana pint of Guinness tsara eo am-pihainoana ireo hira mahazatra ao amin'ny firenena.
FARITRY NY avy any amin'ny seranana ary mandeha amoron-dranomasina safidy tsara hafa.
Andro 1: Cliff of Moher, Irakiana tsy maintsy ananana
Hanomboka amin'ny tranokala mpizahatany manan-danja indrindra eto amin'ny firenena ny lalako. Ary tsy isalasalana fa fizahana natiora, tsy maintsy ho hita. Tsy afaka mandeha any Irlandy izahay raha tsy mahita ny Cliff of Moher.
Ny fotoana tsara indrindra hahitana azy ireo dia mazava ho azy amin'ny fahavaratra, fa io koa no be olona indrindra. Nitsidika azy ireo aho tamin'ny Novambra, ary na eo aza ny andro ratsy (any Irlandy isika, saika azo antoka fa ho avy ny orana) irery isika! Afaka nandeha tamin'ny lalan-kaleha izahay ary ny tranokala manontolo tamim-pahanginana, tsy nisy olona. Na eo aza ny orana sy ny rivotra mahery dia afaka nankafy ilay dia izahay, ny vala dia mifanaraka tanteraka amin'ny tsy fetezan'ny fotoana ary hiampitana azy amin'ny sokajin-taona rehetra.
Cliff of moher manana haavo mihoatra ny 100 metatra ambonin'ny ranomasina. Ny teboka avo indrindra dia misy a Rindrina 200 metatra mitsangana mankany amin'ny ranomasina. Natsangana ny làlambe izay manaraka ny morontsiraka 10 km izay ony hantsana.
Mba hahatrarana azy ireo avy any Galway dia ny mety indrindra dia raiso ny lalana N18 mankany amin'ny vohitra Kilcolgan ary mivily amin'ny lalana N67. Raha atotaly, 75 km eo ho eo izay mihoatra ny antsasaky ny mamakivaky ala, saha sy kijana tokana mahatratra ny ranomasina, tendrombohitra mahatalanjona misy vatolampy mainty, ...
Manoro hevitra anao aho mba hiala sasatra eny an-dàlana mba hankafizanao ny fomba fijery, any amin'ny faritra andrefana Iraniana isika. Amin'ny antsasaky ny fihaonanao Dunguaire Castle, fijanonana tsy maintsy atao.
Afaka mijanona izahay tsy misy olana. Nankany amin'ny fidirana izahay ary tao no nandoa vola mba hidirana amin'ny Precinct of Moher, manodidina 6 euro isaky ny olona Mba hiarovana ny harambato dia midira ao amin'ny Ivotoeran'ny mpitsidika sy ny toerana fijanonan'ny fiara.
Raha vantany vao tafiditra isika dia manaraka ny làlana lehibe ary aorian'ny metatra vitsivitsy dia hanaloka antsika ny hantsana mahavariana. Afaka manana a fomba fijery tsara ny Cliff avy any O'Brien's Tower, nipetraka teo an-tampon'ny vatolampy iray ary manaraka ny làlana lehibe avaratra.
Misy masoivoho manolo-tena hahita hantsana avy amin'ny ranomasina miaraka amina sambo. Tsy nanao izany aho, saingy azo antoka fa tsy maintsy ho mahavariana jereo moher avy ambanyRaha manam-potoana ianao dia ho hitako.
Raha vantany vao vita ity fitsidihana ity dia mamporisika anao aho hiverina any Galway amin'ny làlana mankany anaty fa tsy ny morontsiraka.. Vohitra sy tanàna kely voahodidin'ny kijana maitso no ho hitanao. Sehatra mahafinaritra na aiza na aiza no itodihanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Dublin » West Coast of Ireland, dia fitsangantsanganana ilaina (I)
Ireo trano mihantona, ny fahagagana nataon'i Cuenca